IYunivesithi YaseCleveland State: I-GPA, izikolo ze-SAT, UMTHETHO I-Scores
I-Cleveland State University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Cleveland State University i-GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-Cleveland State University GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeeNkcazo ze-Admissions ze-Cleveland State University.
I-scattergram engentla yinto ekhohlisayo kuba iveza abafundi abancinci kakhulu. Ukunyaniseka kukuba malunga nesithathu sabo bonke abafake izicelo kwiYunivesithi yaseCleveland State abayi kungena. Abafaki izicelo abaphumeleleyo banamathuba okuba babe namabanga kwaye amanqaku okuhlola aqhelekileyo aphezulu okanye angcono. Qaphela ukuba iyunivesithi ayisebenzisi i-SAT okanye i-ACT izigaba zokubhala njengenxalenye yesigqibo sokwamkelwa.
Ngoko ke kuthatha ukuthatha ukuthatha ntoni? Ngokwe-website ye-admissions ye-yesikolo, ngabafakizicelo be-2016 bekufuneka bazalise ikharityhulam yekharityhulam yokulungiselela, babe ne-GPA eyimfuneko ye-2.3 ubuncinane (ngaphandle kwe-4.0), kwaye ube nomlinganiselo wokwenza umsebenzi we-ACT ubuncinane be-16 okanye i-SAT score (RW + M) ye-770. Ukudibanisa le mfuneko emncinci, nangona kunjalo, ayiqinisekisi ukungena, kwaye ezinye iinkqubo e-Cleveland State zinomtya ophezulu wokungenisa. KwiKholeji yeMfundo kunye neNkonzo zoLuntu (oku kubandakanya abahlengikazi), abafakizicelo kufuneka babe ne-2.5 GPA kunye ne-20 UMSEBENZI weqela lomsebenzi okanye i-860 SAT (i-RW + M). KwiKholeji yoBunjineli, ibha iphakamileyo: abafaki-sicelo baya kufuna i-2.7 GPA kunye ne-23 UMSEBENZI wemivuzo yomsebenzi okanye ama-maths okufunda oku-1130 we-SAT. Abafundi abafuna iidanga kumculo banemfuneko eyongezelelweyo yophicotho-zincwadi.
Ngokuqhelekileyo, ukuvunyelwa kwe-Cleveland kaRhulumente kunamanani amaninzi kunamanani onke. Isicelo asiceli malunga nemisebenzi yecandelo elongezelelweyo , kwaye ayifuni incoko . Okokuthi, iyunivesithi inokuqwalasela ngokukhawuleza iikhosi zezikolo zakho eziphakamileyo , kunye nesicelo esifutshane sinika abafakizicelo ithuba lokuba "babelane ngolwazi olongezelelweyo ngekomiti yokwamkelwa" kwiphepha elihlukileyo. Abafakizicelo abaneempawu ezigciniweyo kuya kuba bulumko ukuba basebenzise eli thuba. Ungayisebenzisa ukuchaza italente ekhethekileyo onayo, okanye ukuchaza imeko ekhethekileyo enokuchaphazela ukusebenza kwakho esikolweni esiphakeme.
Ekugqibeleni, khumbula ukuba iYunivesithi yaseCleveland ye-NCAA iCandelo le-I elikhuphisana kwimidlalo ye-varsity ye-16 kwi-Horizon League. Abadlali bebhola kufuneka bahlangabezane neemfuno ze-NCAA zokufaneleka ekungezelelwe kwiyunivesithi.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neYunivesithi yase-Cleveland, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
Iprojekthi ye-Admissions ye-University yeCleveland
Amanqaku afana neCleveland State University:
I-Horizon League ACT Itheyibhile
I-Horizon League SAT Score Comparison
Ukuba uthanda i-CSU, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
IYunivesithi yaseOhio: Iprofayile | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
Ikholeji yase-Ursuline: iProfayili
IYunivesithi ePhambili : iProfayili
Hiram College: IProfayili
Ikholeji yaseBaldwin Wallace: iProfayili
IYunivesithi yaseKent State: Iprofayili | I-GPA-SAT-ACT IGrafu
IYunivesithi yase-Youngstown State: iProfayili
I-University of Rutgers iCamden GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Xa usebenzisa 4WD
I-Case for the Importance of Taking Notes
I-American Economy ngo-2000
Indlela yokumangalela iHolo yamaRhashi
I-Glossary yezobugcisa: Ukupenda